OTU ESI AMỤTA IMEI IPHONE - IOS - 2019
Otu esi amụta IMEI iPhone
Ihe ngosi PowerPoint nwere ike dị oké njọ. Ihe kacha mkpa bụ nchekwa nke akwụkwọ dị otú ahụ. Maka na o siri ike ịkọwa oké mmetụta nke mmetụta uche dabara na onye ọrụ mgbe mmemme ahụ amaliteghị na mberede. N'ezie, nke a bụ ihe na-adịghị mma, ma na ọnọdụ a onye ekwesịghị ịtụ ụjọ ma kwuo ụta. Ọ dị mkpa iji dozie nsogbu malfunctions.
Miser akwụ ụgwọ okpukpu abụọ
Tupu ịmalite inyocha nsogbu ndị isi, ọ bara uru ịkọwa otu n'ime ihe kpatara nsogbu. A gwala ụwa dum otu narị ugboro na ụdị nke Microsoft Office ga-abụ nke dị ala karịa ikikere mbụ na ntụkwasị obi na nkwụsi ike.
Nbudata ma ọ dịkarịa ala otu oyiri ntọala mbụ, ma ọ dịkarịa ala "Ntughari Pụrụ na V @ sy @ PupkiN", onye ọrụ ozugbo kwetara na n'oge ọ bụla, nke ọ bụla n'ime ihe ngwugwu MS Office nwere ike idowe, gbadaa ala, hapụ data dị mkpa, na ihe ndị ọzọ. Ya mere, ederede isi nke njehie ahụ bụ naanị nke a.
Otú ọ dị, na mgbakwunye na nke a, e nwere ọtụtụ ndị ọzọ, nsogbu zuru oke. N'ihi ya, ha kwesịrị ịtụle ya kpọmkwem.
Ebumnuche 1: Ụdị na-ezighị ezi
Ọ bụghị onye ọ bụla maara na nkwupụta nwere ike ịbụ n'ụdị abụọ - PPT na PPTX. O doro anya na onye ọ bụla maara nke mbụ - nke a bụ otu faịlụ ọnụọgụ abụọ na ngosi ahụ, ọtụtụ mgbe a na-echekwa akwụkwọ ahụ na ya. Ma banyere PPTX ihe ndị ọzọ mgbagwoju anya.
PPTX bụ mmepụta ngosi nke etinyere na ndabere nke usoro XML a na-emeghe, ọ bụ ụdị archive. N'okwu a, n'adịghị ka nke mbụ ahụ, enwere ọtụtụ ọrụ - ozi ahụ ka dị njikere, ọrụ na macros dị, na ihe dịka nke ahụ.
Ọ bụghị nsụgharị niile nke MS PowerPoint mepee usoro a. Ụzọ kachasị mma iji rụọ ọrụ na nke a bụ iji nsụgharị ọhụrụ site na 2016. N'ebe a, a na-akwado usoro a. Maka oge mbụ, nchara malitere ịdịwanye karịa, malite na MS PowerPoint 2010, mana enwere ike ịnwepụ (lee nlele "Special Edition site na V @ sy @ PupkiN").
N'ihi ya, pụọ atọ.
Jiri maka MSPoint 2016;
Wụnye "Kọmitii Compatibility Microsoft maka Okwu, Excel, na FormPoint File Formats" maka nsụgharị nke mmemme ahụ;
Jiri ngwanrọ enyi na-arụ ọrụ na PPTX - dịka ọmụmaatụ, PPTX Viewer.
Tụkwasị na nke a, ekwesịrị ikwu na n'ozuzu, e nwere ọtụtụ usoro ndị ọzọ nwere ike ịdị ka ihe ngosi PowerPoint, ma ọ bụghị imeghe ya:
Otú ọ dị, ihe nwere ike ime izute PPTX dị elu, n'ihi ya, e kwesịrị icheta ya, nke mbụ, banyere usoro a.
Ebumnuche nke 2: Ịhapụ usoro ihe omume ahụ
Nsogbu kpụ ọkụ n'ọnụ maka ọtụtụ ụdị software dị na ya, ọ bụghị ịkpọtụrụ PowerPoint. Ihe kpatara nsogbu a nwere ike ịbụ ọtụtụ - nkwụsịtụ nke mmemme ahụ (dịka ọmụmaatụ, egbutụrụ ọkụ), usoro ahụ ejirila njọ, ruo na ihuenyo na-acha anụnụ anụnụ na mberede ngwa ngwa, na ihe ndị ọzọ.
Lee ihe ngwọta abụọ - dị mfe ma zuru ụwa ọnụ. Nhọrọ nke mbụ gụnyere ịmalitegharịa kọmputa na PowerPoint n'onwe ya.
Nke abụọ bụ ntinye zuru oke nke MS Office. Nhọrọ a kwesiri imeghari, ma ọ bụrụ na usoro gara aga enyeghị aka, usoro ahụ amaliteghị.
N'ụzọ dị iche, ekwesịrị ikwu banyere otu nsogbu dị otú ahụ, nke ọtụtụ ndị ọrụ na-ejikarịghị aka. E nwere okwu mgbe Microsoft Office nwere mgbagwoju anya n'oge usoro mmelite ahụ, mere ụfọdụ amaghị ama amaghi, na dịka nsonaazụ, mgbe ị wụnye patch, ọ kwụsịrị ịrụ ọrụ.
Ihe ngwọta ka bụ otu - wepu ma weghachite ngwugwu dum.
Ebumnuche nke 3: Mmebi na faịlụ ngosi.
Ihe kpatara ya bụ nsogbu mgbe mmebi ahụ emetụtaghị usoro ihe omume ahụ n'onwe ya, mana kpọmkwem akwụkwọ ahụ. Nke a nwere ike ime n'ihi ọtụtụ ihe. Enwere ike ịchọta nkọwa ndị ọzọ na isiokwu dị iche.
Ihe Ọmụmụ: PowerPoint anaghị emeghe faịlụ PPT
Ihe kpatara ya 4: nsogbu usoro
Na njedebe, ọ bara uru iji dee nkenke ndị nwere ike ịchọta na ụzọ dị mkpirikpi iji dozie ha.
Ọrụ Nje Virus
Kọmputa nwere ike ibute nje ndị mebiri akwụkwọ.
Ihe ngwọta bụ iṅomi kọmputa ma kpochapụ malware, wee weghachite akwụkwọ ndị mebiri emebi iji usoro ahụ akọwapụtara n'elu. Ọ dị mkpa iji kpochapụ usoro nje ahụ na mbụ, n'ihi na enweghị nke a, iweghachite akwụkwọ ahụ ga - eyi ka ọrụ ọhụụ.
Ibu ọrụ usoro
PowerPoint nwere ihe ngosi nke oge a nke na-adịghị ike ma ọ bụ nke software, nke na-erekwa ihe onwunwe. Ya mere ọ ga-abụ na ihe omume ahụ adịghị emeghe naanị n'ihi na kọmputa ahụ nwere ihe nchọgharị 4 na-agba ọsọ na 10 taabụ na nke ọ bụla, 5 eserese na-agụnye na Ultra HD n'otu oge, nke ọma, megide ndabere a 5 a na-ebelata ihe egwuregwu kọmputa. Usoro a nwere ike ọ gaghị enwe ego zuru oke iji malite usoro ọzọ.
Ihe ngwọta bụ imechi usoro niile nke atọ, wee malitegharịa kọmputa ọzọ.
O kwere omume na ihe ọ bụla na kọmputa anaghị arụ ọrụ, ọ bụghịkwa PowerPoint gụnyere. N'okwu a, ọnọdụ dị adị bụ mgbe RAM na-esikpu na mkpofu site na usoro ndị ọzọ.
Ị nwere ike idozi nsogbu ahụ site na ịmepụta usoro na ihichapụ ncheta.
Hụkwa: Otu esi ehichapụ kọmputa site na mpempe akwụkwọ site na iji ihe omume CCleaner
Nwepụta ihe ngosi
Mgbe ụfọdụ, enwere ọnọdụ mgbe ha na-agbalị ịmepụta nkwupụta na ngwaọrụ na-adịghị ike, onye okike nke anụbeghị banyere njikarịcha. Ihe odide dị otú ahụ nwere ike ịnwe ọtụtụ faịlụ mgbasa ozi na nnukwu ibu dị elu, usoro dị mgbagwoju anya nke hyperlinks na ntụgharị aka na akụ na Intanet. Atụmatụ ego ma ọ bụ ngwaọrụ ochie nwere ike ghara ịnagide nsogbu a.
Ihe ngwọta bụ iji bulie ma wedata ibu nke ngosi.
Ihe omumu: Ngosi ihe ngosi PowerPoint
Na njedebe, ọ dị mkpa ikwu na mgbe ị na-arụ ọrụ na ngosi na ọkwa ọ bụla nke ọkachamara, ọ bara uru iji tụlee nsogbu nke nsogbu. Ya mere, ebe a maka onye ọrụ kwesịrị ịbụ ihe atọ dị mkpa nke nchedo ọrụ na akwụkwọ:
Ndabere ndabere na PC;
Backups na mgbasa ozi nke atọ;
Ugboro ugboro ntuziaka na akpaka na-azọpụta.
Hụkwa: Chekwaa ngosi na PowerPoint
Ọ bụrụ na a hụ isi ihe atọ ahụ, ọbụlagodi na ọ bụrụ na ọdịda adịghị, onye ọrụ ga-enweta ọ dịkarịa ala otu isi iyi nke nkwupụta, na-echebe onwe ya site n'ịfu ọrụ ya niile.